Download ဖဲသုံးရွက် - ZingPlay for Android - Appszoom
by: ZingPlay Games • 805 9.2
- ပိုကောင်းသောအတွေ့အကြုံ ကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန် အသေးစားချွတ်ယွင်းမှုများကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
» ဖဲသုံးရွက် - ZingPlay
[Zawgyi - scroll down for Unicode]
ကိုး - မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ နံပါတ် ၁ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း ကဒ် ကစားနည်း
ကိုး ဂိမ်း ကို ရှမ်း၊ပိုကာ စသည့် ကဒ်ကစားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အတူ ကစားလေ့ ရှိသော ရိုးရာကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းသော ကစားနည်းများနှင့် အတူ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အတွေ့အကြုံများကို သင်ဧ။် မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းမှ တဆင့် ရရှိနိုင်မှာပါ။ (အင်တာနက် ဒေတာ ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။)
ကိုး ဂိမ်းရဲ့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ အသွင်အပြင်ကတော့
-ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကစား သမားများနှင့် အတူတူကစားနိုင်ခြင်း
- လှပပြီး စွဲဆောင်မူရှိတဲ့ ရုပ်ပုံ ဒီဇိုင်းများ
- ပြတ်သားတဲ့ 3D ရုပ်ကြွ ကဒ်များ
- လွတ်လပ်စွာ ကစား ရင်း နေ့တိုင်း ရွှေများ ရယူနိုင်ခြင်း
- အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ သိမ်းဆည်းပေးထားခြင်းကြောင့် ကစားပွဲစဉ် အတွေ့အကြုံများမှ တဆင့် သင်ခန်းစာများ ရရှိ နိုင်ခြင်း
- အခမဲ့ download ရယူနိုင်ခြင်း နှင် အတူ
- မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း အများစုတွင် စတင် ကစားနိုင်ပါပြီ။
နာမည်ကြီး ကဒ် ကစားနည်းများ ဖြစ်သည့် ရှမ်း နှင့် ပိုကာ ကစားနည်း ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ကိုး ဂိမ်း သည် ကစားရ ပိုမိုလွယ်ကူပြီး စွဲဆောင်မှုရှိသော အသွင်အပြင်များ ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကဒ် ဂိမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုး ဂိမ်း ဟာ သင့်ထံ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံများကို ယူဆောင်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။
ကဒ် ဂိမ်း ကစား ရင်း ကံကောင်းမှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်း အချက်အလက်များကို သိရှိရန် Facebook Page လေးကို Like လုပ်ပေးထားဖို့ အကြုံပြုလိုပါတယ်။
ကိုး - မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နံပါတျ ၁ မိုလျဘိုငျးဖုနျး ကဒျ ကစားနညျး
ကိုး ဂိမျး ကို ရှမျး၊ပိုကာ စသညျ့ ကဒျကစားသညျ့ နညျးလမျးမြားနှငျ့အတူ ကစားလေ့ ရှိသော ရိုးရာကစားနညျး တဈခုဖွဈပါတယျ။
ရိုးရှငျးသော ကစားနညျးမြားနှငျ့ အတူ စိတျလှုပျရှားဖှယျ အတှအေ့ကွုံမြားကို သငျဧ။ျ မိုလျဘိုငျးဖုနျးမှ တဆငျ့ ရရှိနိုငျမှာပါ။ (အငျတာနကျ ဒတော ဖှငျ့ထားရနျလိုအပျပါတယျ။)
ကိုး ဂိမျးရဲ့ တဈမူထူးခွားတဲ့ အသှငျအပွငျကတော့
-ကမ်ဘာတဈဝှမျးရှိ ကစား သမားမြားနှငျ့ အတူတူကစားနိုငျခွငျး
- လှပပွီး စှဲဆောငျမူရှိတဲ့ ရုပျပုံ ဒီဇိုငျးမြား
- ပွတျသားတဲ့ 3D ရုပျကွှ ကဒျမြား
- လှတျလပျစှာ ကစား ရငျး နတေို့ငျး ရှမြေား ရယူနိုငျခွငျး
- အဆငျ့သတျမှတျခကျြမြား၊ သတငျးအခကျြအလကျမြား ကို ပွီးပွညျ့စုံစှာ သိမျးဆညျးပေးထားခွငျးကွောငျ့ ကစားပှဲစဉျ အတှအေ့ကွုံမြားမှ တဆငျ့ သငျခနျးစာမြား ရရှိ နိုငျခွငျး
- အခမဲ့ download ရယူနိုငျခွငျး နှငျ အတူ
- မိုလျဘိုငျးဖုနျး အမြားစုတှငျ စတငျ ကစားနိုငျပါပွီ။
နာမညျကွီး ကဒျ ကစားနညျးမြား ဖွဈသညျ့ ရှမျး နှငျ့ ပိုကာ ကစားနညျး ကို ပေါငျးစပျထားသော ကိုး ဂိမျး သညျ ကစားရ ပိုမိုလှယျကူပွီး စှဲဆောငျမှုရှိသော အသှငျအပွငျမြား ဖွငျ့ ပေါငျးစပျထားသော ကဒျ ဂိမျး ဖွဈပါသညျ။
ကိုး ဂိမျး ဟာ သငျ့ထံ စိတျလှုပျရှားဖှယျ အကောငျးဆုံး အတှအေ့ကွုံမြားကို ယူဆောငျလာမှာ အသအေခြာပါပဲ။
ကဒျ ဂိမျး ကစား ရငျး ကံကောငျးမှုတှေ ရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
နောကျဆုံးသတငျး အခကျြအလကျမြားကို သိရှိရနျ Facebook Page လေးကို Like လုပျပေးထားဖို့ အကွုံပွုလိုပါတယျ။
The official mobile app of the CRS 2018 conference. This application was commissioned by CRS to be built on their behalf by Production Resources Group LLC (PRG). This app has been built with the permission of CRS and under their express instruction.
This abc puzzle isafree education game. These alphabets puzzle is designed for kids to learn easily. Just click the alphabet and play with characters. You need to swipe the screen with the another one and if you need help then click on the hint button and select the option which you want. It is easy to play and learn.
Shooting app to kill Augmented Reality Ghosts
T-Original Dialer isamobile application for Android and other smartphones, offering VoIP Calls from data enabled mobile phones (2G/3G/4G or WiFi) to any landline or mobile devices around the world. Features: *VoIP Calls via Wi-Fi, 2G / 3G / 4G. *Works in all Countries and all Networks across firewalls. *Smooth voice quality *Echo cancellation…
Learn Simple Mathematics : Math Quiz
Want To Increase Speed In Simple Math Calculations And Want To Test Your Speed In Calculations Like Additions Subtractions Multiplication Division. Random Questions Learn Siple Mathematics:Math Quiz for all. Test your mental ability, Train your brain for calculation, Increase Speed In Calculation Part. Play math quiz fun and education. *…
Bangla to French Translator is free download application to translate Bangla to French & French to Bangla And also used asaDictionary and learning languages. Translate Bangla to French Translate French to Bangla Bangla to French Translations French to Bangla Translations Translator Bangla to French dictionary Translator French to Bangla di…
E-Way Bill Q&A
Some frequently asked questions and answers about E-way bill system are given in this application. If you have any kind of doubt about E-way bill system, this application’s Questions and answers may help you.
Download ဖဲသုံးရွက် - ZingPlay
Free - 3.0.0 - 50M